Decoora waa degel ka tirsan Actualidad Blog. Degelkeenu wuxuu u heellan yahay adduunka qurxinta, dhexdeedana waxaan u soo jeedinaynaa fikradaha asalka ah ee gurigaaga, beertaada, xafiiskaaga ... inta aan ka hadlayno isbeddellada iyo horumarka waaxda.
El Kooxda tifaftirka Decoora waxay ka kooban yihiin taageerayaasha adduunka qurxinta oo ku faraxsan inay la wadaagaan khibradooda iyo xirfaddooda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto, ha ka waaban noogu soo qor foomkan.
Marwalba waan caddayn jiray in waxayagu ahaa inaan noqdo macallin. Sidaa awgeed, waxaan haystaa shahaadada Ingiriisiga Philology. Laakiin marka laga tago xirfadda, mid ka mid ah hamidaygu waa adduunka qurxinta, kala dambeynta iyo farshaxannada qurxinta. Meesha hal-abuurnimadu tahay inay markasta goobjoog ahaato taasina waa caqabad aan jeclahay.
Adoo haysta shahaadada Xayeysiinta, waxa aan aad u jeclahay waa qorista. Intaas waxaa sii dheer, waxaa i soo jiitay wax kasta oo bilic ahaan raalli ka ah oo qurux badan, waana sababta aan u jeclahay qurxinta. Waan jeclahay qadiimiga iyo Waqooyiga Yurub, guridda iyo qaababka warshadaha iyo kuwa kale. Waxaan raadsadaa dhiirigelin waxaanan bixiyaa fikradaha qurxinta.
Hadda waxaan ahay wakiil iyo soo dejiye alaab heer sare ah, oo badankood Nordic ah, ka dib 10 sano oo aan khibrad u lahaa qaybta Tafaariiqda, markii ugu horreysay aniga oo ah maamule bakhaar dhowr naqshadeyn iyo qurxin qurxis ah oo ku yaal Madrid, iyo markii dambe aniga oo ah naqshadeeye gudaha ah iyo tilmaame istuudiyaha dhismaha. Waxaan marwalba lasocday idiosyncrasies of Scandinavian design: lagama maarmaan, shaqeynaya, waqtila'aan ah, midab leh oo aan xor ka aheyn farshaxanimada.
Ka qalin jebiyey Isbaanishka Filolojiyada, xiisaha waraaqaha iyo dhammaan waxyaabaha bilicsanaanta u qurux badan. Isboortiga aan ugu jeclahay: inaan adduunka u sheego dareenkayga ku saabsan wax kasta oo la xiriira adduunka qurxinta gudaha iyo walxaha naqshadeynta. Waxaan rajeynayaa inaad ka helayso nuxurkeyga.